Project Cases - Shandong Guiyuan Yepamberi Ceramics Co, Ltd.
Makorokoto kuchirongwa chitsva
Musi waGumiguru 29, Hubei Shengda Pepa 5200/600 yekudonhedza zvinhu zvakagadzirwa zvinobudirira kuiswa. Muchina wese wakagadzirwa neShandong Guiyuan zvedongo zvikamu. Parizvino, pane angangoita 50nos mapepa emuchina mapurojekiti anotsigirwa naShandong Guiyuan ane chinopfuura matani zana nemakumi mashanu ezviuru / gore.
Kutenda kune vese vatengi avo vakasarudza iyo SICER brand yekutenda kwavo.SICER ichaenderera ichiteedzera kugona uye kugona. Kutenda kwakanakisa kuchengetedza mutsetse wevatengi wezvigadzirwa nezvigadzirwa zvirinani uye basa riri nani.
Iyo purojekiti nyowani 5600/1000 bepa muchina unomhanya zvinobudirira! Iyo arc yepamusoro yekare yaive ne SICER ceramic dewatering element.
Kutenda kune vese vanhu vanokurudzira iyo yekumhanyisa-mhanyisa mapepa muchina wekudonhedza zvinhu zvemunharaunda. Ndatenda nekuvimba kwako uye nerutsigiro.
Mukutarisana nekutenda kwakasimba, matambudziko ese anozove asina kukosha.
Guangxi 6600/1300 bepa muchina unomhanya zvakanaka kwegore rimwe
Noushamwari kukorokotedza Guangxi 6600/1300 pepa muchina wakatsetseka mashandiro ekushomeka kwemvura yekushandisa kwegore Rwendo rwekudzoka rwakaziviswa kuti hupenyu hwebasa rekugadzira network hwave kusvika pamwedzi gumi, uye iro bepa remhando yepamusoro uye simba rekushandisa zvinowirirana zvizere nematanho eEuropean.
Kutenda kune Valmet nyanzvi nekutungamira, rubatsiro. Kutenda kushamwari dzinosimbisa Valmet uye SICER kuchinjana pamwe nekubatana.
Hombe-pamwero Anoumba muchina chirongwa chakapfuura mutengi kuongororwa zvakabudirira
Musi waJune 3, 2017 Huru yekugadzira muchina bhokisi yakasvika. Kurema kwebhokisi rega rega kunosvika matani gumi. SICER yakapa zvigadzirwa zvepamusoro.
Musi waChikumi 13, 2017, VaLiu Geng, kubva kufekitori yemuchina wekugadzira mapepa naVaFrank Brown, mutengi weBritish, vakashanyira nzvimbo nyowani yemuchina, ndokuyedza bhokisi uye zvedongo.
Nhatu waya 5800/700 yakakwira-mhanyisa mapepa muchina chirongwa kutanga kumusoro
Musi waZvita 29, 2016, India Triassic 5800/700 yakakwira-mhanyisa bepa muchina zvedongo dewatering chinhu, nhasi chatanga kupinda yekupedzisira yekumisikidza danho.
Iyi michina yekugadzira mapepa kusvika zvino ndiyo michina mikuru yekuChina yemapepa muIndia, pepa rakapamhamha, muchina unomhanyisa, unodira muhunyanzvi hwemberi. Pachinzvimbo chechipfuwo chakakwira-mhanyisa pepa muchina wepamusoro-soro kugadzira chikamu, ne Shandong Changhua bepa Machina uye michina kambani dhizaini uye kugadzira.
Changhua kambani inonamira kukoshesa kwakanyanya kune mhando yepamusoro ceramic, zvinoenderana neyakajairwa tsika, iyo yekumhanyisa chiratidzo inofanirwa kuve sarudzo yakanakisa. Ino nguva sarudza SICER, iyo inoratidza kuti SICER brand yakasimwa zvakadzika mumoyo yevatengi, uye chigadzirwa chigadzirwa chakazivikanwa zvizere nevashandisi. Iyo nhoroondo yeinotora brand monopoly yakakwira-yekumhanyisa mapepa muchina wekudiridza zvikamu zvapera, panogona kunge paine zvimwe zvigadzirwa zvinoonekwa.
Ichi chichava chiyeuchidzo cheSICER pane yakakwira-inomhanya mapepa muchina zvedongo zvekudiridza pasi, uye uno mukana wakanaka wekuwedzera musika wekunze.
Makorokoto kuTaizhou Sango 5200/900 matatu waya mapepa muchina izwi zvakanaka
Iyo 5200 bepa muchina chirongwa chekudzikisa mvura zvigadzirwa zvakagadzirwa naSicer kumatatu matete ewaya yeTaizhou Forest Pepa Co, Ltd. chinhu chakakosha chiitiko chedu chekupinda mumunda weiyo inomhanya pepa muchina. Iyo max inoshanda yekumhanyisa iri kusvika ku921 m / min, uye zvinobudirira kutyora yekune imwe nyika monopolyn yezvinodiridza zvikamu mumunda weChina yekumhanyisa bepa muchina. Nekuda kweizvozvo, kuburitswa kwayo kwezuva nezuva kwakapfuura matani chiuru, uye hupenyu hwebasa rekugadzira waya kusvika pamazuva zana nemakumi masere neshanu, yakawanda se38.9% yemari yakachengetedzwa kupfuura zvigadzirwa zvekunze zvemamwe mapurojekiti, yakawana chinoshamisa kuchengetedza. Iyo sarudzo yezvakaunzwa zvigadzirwa zvakare inounza yakawandisa hupfumi uye magariro mabhenefiti.
Ceramic Dewatering zvinhu zvinoshandiswa pane 6600 yekuputira mapepa muchina yakabudirira kupfuura kugamuchirwa
Ndira 5,2016,Ceramic dewatering element (kureba kuri 7250mm, dhizaini yekumhanyisa ndeye 1300m / min) inoshandiswa pane 6600 yekumonera bepa muchina yakabudirira kupfuura kugamuchirwa uye yakaiswa mukushandira. Izvo zvakagadzirwa neShandong Guiyuan Yepamberi Ceramics Co, LTD.
Izvi zvigadzirwa zvakagadzirwa neakakosha zvedongo zvinhu uye neyemberi gungano, kubatana, kukuya maitiro, ayo akagadzirwa naSicer akazvimiririra uye ave achizivikanwa zvakanyanya mumusika. Iyo mhando yezvigadzirwa inoenderana neyakajairwa muyero.
Izvo zvigadzirwa zvinoiswa mukugadzirwa zvakanaka, izvo zvichaisa hwaro hwakasimba hwekudyidzana kweSicer brand.Sicer vanogamuchira nemufaro vatengi vekare uye vekare kuti vashanyire hutungamiriri uye vaise pamberi mazano akakosha.